na ku saabsan - bamka Sand, sump saar, saar Gravel saaraha
Saar slurry Horizontal
AH Birta damacsan slurry saar
AHR Rubber damacsan saar slurry
HH Cadaadis High saar qaybin
L Birta Light Duty slurry saar
M Birta slurry saar
Filter ZJ saar Quudinta Press
ZGB Performance High saar slurry
Vertical slurry saar
SP (R) Taxanaha sump saar
40PV-SP Belt Drive sump saar
65QV-SP Vertical sump saar
100RV-SPR Rubber sump saar
250TV-SP sump saar
Sand (Gravel) saar
G oo la bixinin Taxanaha saar
6 / 4D-G Gravel saar
8 / 6E-G Sand saar
10 / 8F-G Sand saar
12/10 G-bixinin Sand Gravel saar
18 / 16G-G Sand Gravel saar
saar ku milmaya
450WN ku milmaya saar
500WN ku milmaya saar
700WN ku milmaya saar
2QV-AF Wiski saar
4RV-AF Wiski saar
TL saar (R) Taxanaha FGD
DT Taxanaha FGD saar
Mashiinka lisa slurry
Waxyaabaha polyurethane Xidho Qaybo
A05 Xidho Qaybo High Chrome Daawaha
Rubber Waxyaabaha Xidho Qaybo
JP Birta & Qalabka Co., Ltd la aasaasay sanadkii 2006, waa farsmada heerka sare ah soo saaraha weyn xirfadeed bamka warshadaha ku hawlan cilmi baarista iyo dhoofinta bamka slurry, xirtaan iyo daxalka qalabka adkaysi iyo processing OEM. Kooxda bamka JP daboolayaa in ka badan 40000 mitir oo laba jibbaaran, caasimadda ka diiwaan gashan yahay 18 million yuan. Muddo sanado ah xoog xoog iyo fikirka dadka u janjeedha, waxaan u nuugo tiro badan oo ah maareynta tayo sare leh oo talanti farsamo. Jira shaqaalaha waa in ka badan 220 oo qof, kuwaas oo 30% ay yihiin farsamo. Ka sokow, JP bamka ayaa loo magacaabay brand gobolka sare caan ah iyo sayniska iyo farsamada ganacsi hal-abuurnimo. ISO9001 dhaqan: 2008 nidaamka maareynta tayo leh, JP bamka lagu abaalmariyey horyaalka ee keydinta tamarta Hebei iyo ganacsiga ilaalinta deegaanka. Iyadoo ballaarinta joogtada ah ee baaxadda, Shirkadda ayaa noqday saldhigga ugu weyn ee bamka slurry sahayda in industry isla Shijiazhuang.
JP bamka uu leeyahay waayo-aragnimo sanado badan wax ku ool ah ee horumarinta iyo codsiga ee bamka slurry. Iyada oo ku saleysan soo bandhigid iyo ahmiyadda ugu technology advanced shisheeye, taxane wax soo saarka ah ee waxqabadka kaamil ah, iyo hoos imaad ayaa lagu sameeyay. Waqtigan xaadirka ah, wax soo saarka ugu weyn waxaa ka mid ah taxanaha ah ee bamka slurry, injineernimada FGD bamka gaar ah, bamka quruurux, bamka waarididda ah, bamka Wiski, bamka kiimikada iyo dhowaan la sameeyey caag PU. Boqolaal daydo, si ballaaran loo isticmaalo macdanta, metallurgy, dhuxusha lagu dhaqo, korontada, gaaska desulfurization qiiqa, waarididda ah, injineernimada biyaha, warshadaha batroolka iyo kiimikada, maamulka degmada, ilaalinta deegaanka, daawaynta bullaacadaha iyo warshadaha kale.
aagga Our saarka daboolaa aag of 24000 mitir oo laba jibbaaran, awoodda wax soo saarka guud ee wax soo saarka sanadle ah waa 10000 units (qaybood), iyo wax soo saarka ee sannadlaha ah ee dhammaan noocyada kala duwan ee castings daawaha chromium sare waxaa loo 2000 aagga saarka tons.The u qaybsan yahay shan degmo hal meel ah iyo laba xarumood, kuwaas oo loo shubay caaryada, daaweynta kulaylka, machining wanaagsan, Abuuran alxanka iyo daahan shirka shan goobaha wax soo saarka; dayactir dhammeeyey, Falanqaynta tayada iyo tijaabo biyaha. waxyaabaha ugu weyn ee wax soo saarka: A05, A49, A33, A51 iyo chromium sare bir kale ee kabka cad.
Horumarinta ee design wax soo saarka iyo diyaarinta habka ay ansixiyeen technology CFD iyo CAPP. saxnaanta imtixaanka saldhigga imtixaanka nijaasta daahiriya karka waa ilaa sax heerka ISO9906, taageerada kala duwan ee qalabka-sax sare imtixaanka, alaabtii gorfaynta iyo shubay si on.All ay qaataan phenolic iyo wax taaj oo kale. Dhanka kale si loo horumariyo tayada nidaamka bamka slurry, JP bamka barayaa technology cusub oo laga badiyay shubay xumbo. Isticmaalka farsamada this, roughness dusha loo shubay gaari karaan Ra3.2 in 12.5μm; size shubay gaari karaan CT7 ilaa 9; Kaalmada machining ah ugu badnaan waa 1.5 ilaa 2mm. shubay laha flash, Burr oo qabyo ah, kaasoo xaqiijinaya qalabka iyo muuqaalka ah ee qaybo ka mid bamka slurry. Qalabaysan 1 tons, 2 tons, 5 tons foornada inta jeer dhexe, waxaan sameeyo karaa 8-10 tons ridaya mar mar. workshop daaweynta Heat aadamuhu waxa la laba 20 foornada daaweyn kulaylka nooca-caabin cubic. Inta badan qalabka mashiinka waa CNC isweydaarsiga machining, oo waxaa jira 4.2M oo 4.5 lathe taagan iyo in ka badan 20 qalabka mashiinka unugyada. Intaa waxaa dheer, waxaa jira noocyo kala duwan oo qalab intay, goynta biraha iyo qalabka alxanka, qalabka daafigaw heerka impeller, qalabka wax taaj oo kale, sandblasting qalabka qiraan si loo hubiyo in awoodda wax soo saarka.
JP bamka si buuxda u fuliso nidaamka maareynta ISO9001 iyo ilaalisaa geedi socodka kormeerka. diiwaanka kormeerka Tayada waxaa laga helaa dhammaan geedi-soo-saarka. alaabtii Professional ka mid ah spectrometer, analyzer metallographic, qalabka cillad, mashiinka baaritaanka farsamo (cadaadis, raadka, qalbi engegnaantooda aawadeed), flowmeter magnetic, eeg cadaadis, ammeter, meter gariirka, meter buuqa, qalooca Haydarooliga tijaabo ah software xirfadeed. ogaanshaha Perfect damaanad qaadaya tayada qalabka si loo hubiyo in bambooyin kasta iyo qaybo si buuxda u waafaqsan yihiin shuruudaha.
JP bamka ku faafay suuqa guryaha oo dhan ee Shiinaha ka badan 30 gobol iyo degmo. Sidoo kale ayaa si guul leh loo isticmaalay in 20 dal ee shaqaalaha line .Ugu caalami ah ay leeyihiin waayo-aragnimo xirfadeed si ay u bixiyaan adeegga macaamiisha. adeegga Pre-sale: weheliso xaaladaha shaqada dhabta ah, waxaan ku siin kara adeegyada la talinta iyo qorshaha design ugu macquul ah. In la iibiyo adeegyada: macaamiisha-dhisan, waxaan ku siin kormeerka, ilaalinta iyo badalaada qorshaha design. Ka dib-sale adeegga: waxaan bixiyaan adeegyo dhammaystiran oo ay ku jiraan rakibaadda iyo guddoominta qalabka, tababarka shaqaalaha, dayactir sahayda iyo adeegyada kale.
Ra'yiga horumarinta Enterprise :
Waayo, shirkadaha, dadka u janjeedha
Waayo, wax soo saarka, sida adag sida dhagaxyada
Waayo, suuqa, hal-abuurnimo ku ool ah
Waayo, macaamiisha, si joogto ah
JP bamka ayaa u hoggaansanaayeen daacadnimadayda, hal-abuurnimo, hufnaan, ruuxa iskaashiga iyo "abuuranto qiyam macaamiisha" falsafada ganacsiga. asxaabta soo booqan warshad iyo rajeyneynaa in aad la shaqayso si ay u abuuraan mustaqbal wanaagsan.
Company: JP BIRTA & QALABKA Co., LTD
Shiinaha ayaa sheegay in MA doonistayda ...
Shiinaha wuxuu damcay inuu kala firdhinta walaac ku saabsan hankeeda ku Jacaylku macdanta qaniga on Monday, iyadoo hadalkii rasmi ah bei ...
Argentina noqotay macdanta cusub la ...
maamulka Argentine, ciyaartoyda warshadaha iyo ururada ayaa la filayaa inuu saxiixo todobaadkan macdanta dheer la sugayay federaalka heshiin ...